Chinyorwa: Inosanganisira gramu poda: Oxytetracycline ………………… Mutakuri adhira ………………………………………………………. Description: Iyo iri kuita kurwisa gramu-yakanaka uye gramu-isina hukama seSrere ...
Maumbirwo: Tilmicosin (seye phosphate) ………………………………………. ………………… 200mg Adhiraini yekutakura ……………………………………… ………………………………………. 1 g Tsananguro: Tilmicosin yakagadziriswa pamakemikari kwenguva refu-inobata macrolide mabhakitiriya anoshandiswa mune veterinary mushonga. iyo inoshanda zvinopesana neye gramu-yakanaka uye imwe gram-isina hutachiona (streptococci, staphylococci, pasteurella spp., mycoplasmas, nezvimwewo). yakaiswa nomuromo nguruve, tirmicosin inosvika pakakwirira yeropa mushure memaawa maviri uye inochengetedza yakanyanya kurapa concen ...
composition: tiamax (tiamulin 80%) ndeye chikafu chekudya chine 800 g ye tiamulin hydrogen fumarate pa kg. chiratidzo: tiamulin chidimbu-chinogadzirwa chinobva kune cheururomutilin. Iyo inoshanda kwazvo inopesana neye gramu-yakanaka zvisikwa, mycoplasmas uye serpulina (treponema) hyodysenteriae. tiamulin inoshandiswa mukudzivirira uye kutonga kwezvirwere zve mycoplasmal kunge enzootic pneumonia uye chirwere chisingaperi chekufema mumakunguuru uye huku. nguruve dysentery, porcine colonic spirochaetosis uye porcine prol ...
Kuumbwa: Flofenicol …………………………………………. ………………… 100mg Chishandiso adhira …………………………………………………………… ……………………………. 1 g Tsananguro: Florfenicol ndeye amphenicols yakawedzera-sipidhi mishonga inorwisa mabhakitiriya, vachipesana nemhando dzakasiyana dzegiramu-yakanaka mabhakitiriya, Gram-isina mabhakitiriya uye mycoplasma ine yakasimba antibacterial chiitiko. Florfenicol inonyanya kuve bacteriostatic mumiriri, nekusunga kune ribosomal 50s, inhibhibha bacterial protein synthesis. Florfenicol mu vitro antibacterial chiitiko cheazhinji manyorganorganic uye chloramp ...
Kuumbwa: Ivermectin 0,2%, 0,6%, 1%, 2% Rondedzero: 0,2%, 0,6%, 1%, 2% Ivermectin inoshanda kwazvo mukurapa uye kudzora mitezo yemukati neyekunze mukati memombe, gwai, mbudzi, nguruve uye ngamera Kuratidzira: Vetomec inoratidzwa kurapwa uye kudzora kwematumbu mhute dzakakomberedza, lungworms, maburi, screwworms, kubhururuka mamhutsi, mbeva, maki uye mites mumombe, gwai, mbudzi uye ngamera. Utumbu hwehonye: cooperia spp., Haemonchus placei, oesophagostomum radiatus, ostertagia ...
Kuumbwa: Diclazuril ………………………………… 5mg Kutakura kushambadzira ……………………………………… 1g Maitiro: Ichena kana chena-senge poda Tsananguro Diclazuril ndeye triazine benzyl cyanide, kunge nyowani, yakakwira kunyatsoshanda, yakaderera toxicity anticoccidial zvinodhaka, zvinoshandiswa zvakanyanya muhuku coccidiosis. Diclazuril anticoccidial magiramu maitiro haina kujeka. basa guru re coccidia peak, nemhando dzakasiyana uye dzakasiyana genera coccidia, senge eimeria hombe pfungwa yechizvarwa chechipiri chizvarwa checocidia kutenderera. asi hofori, ...